Ọrụ ndị isi jụrụ oyi na ndị na -ekpo ọkụ: gịnị ka ha na -ebu amụma dị iche na ibe ha? | Ọzụzụ nghọta
Emebela ya ma mara na ọrụ ndị isi nwere njikọ chiri anya (yana ọgụgụ isi) n'ọtụtụ akụkụ nke ndụ anyị: anyị nwere data gbasara amụma ha gbasara. ọrụ agụmakwụkwọ, ka creativeness, nkà ịgụ ihe na nghota ederede, na mgbakọ na mwepụna asụsụ na ihe niileawakpo.
Otú ọ dị, ka ọ na-adịkarị, n'ịtụle mmetụta ọrụ ndị isi na akụkụ dị mkpa nke ndụ anyị, nyocha na-elekwasịkarị anya n'ihe a na-akpọ oyi ọrụ, ya bụ, ka ọ na -enwekwu “ọgụgụ isi” na enweghị mmetụta uche (dịka ọmụmaatụ ebe nchekwa, mgbanwe mgbanwe echiche na mgbochi); a na-ekwu okwu dị obere karịa ihe a na-akpọ ọrụ ndị isi na-ekpo ọkụ, ya bụ, ndị metụtara ebumnuche na-eduzi mkpebi anyị (ọkachasị ma ọ bụrụ na akụkụ mmetụta uche na mkpali juputara), njikwa mmetụta uche, ịchọ afọ ojuju na ike yigharị ha. .
N’afọ 2018, Poon n'ihi ya ekpebiela ịnwale otu ndị na-eto eto n'ihe gbasara mmụta ụlọ akwụkwọ yana gbasara ọdịmma uche na ike ime mgbanwe; n'otu oge ahụ, a nwalere otu ndị ntorobịa nyocha nke ọrụ ndị isi, ma oyi ma ọkụ, site na batrị ọkọlọtọ ọkọlọtọ.
Kedu ihe si na nyocha ahụ?
N'agbanyeghị ihe onye edemede kwuru n'edemede nke ya, ule niile a na -eji enyocha oyi (njikwa anya, mgbochi ebe nchekwa na -arụ ọrụ, mgbanwe echiche na atụmatụ) na ọkụ (ịme mkpebi. r = 0,18!); nke a na -enye anyị ohere ịtụle, n'ikwekọ n'ihe Miyake na ndị ọrụ ibe ya rụrụ ụka, na akụkụ dị iche iche nke ọrụ onye isi anaghị adịpụ iche na ibe ha.
N'ezie akụkụ na -atọ ụtọ nke ukwuu bụ na, ọnya mmetụta nke ọkwa ọgụgụ isi, ọrụ ndị isi oyi buru amụma nke ọrụ agụmakwụkwọ nye ndụmọdụ ọrụ ndị nlekọta obi ụtọ gosiputara na amumaimeghari uche.
Ọrụ onye isi oyi na -ekpo ọkụ, mgbe ọ na -arụ ọrụ synergistically, mgbe ahụ ọ dị ka ihe owuwu abụọ dị iche iche yana mkpa dị iche iche gbasara ọnọdụ ndụ dị iche iche.
N'ikpeazụ, data ndị ọzọ dị ịrịba ama gbasara usoro akara dị na ule ejiri mee nyocha a, site na afọ 12 ruo 17: ọnụ na-arụ ọrụ ebe nchekwa na -egosi uto na -aga n'ihu na afọ (n'ime oke a tụlere na nyocha a), na -egosikwa mmụba ngwa ngwa n'ihe dị ka afọ 15; nakwa ihe nlekọta anya na -egosi na ọ na -eto eto mgbe niile na ọgbọ a; Ebe ahụ mgbanwe mgbanwe o yiri ka ọ na -abawanye n'esepụghị aka ruo afọ 16; N'otu aka ahụ, ike mgbochi na -egosi ịrị elu dị elu site na 13 ruo 16; Ebe ahụ atụmatụn'ikpeazụ, ọ na -egosi uto na -aga n'ihu na afọ, na -egosi na ọ bụ ọnụ ọgụgụ kacha elu na -abawanye n'ihe dị ka afọ 17.
Dị nnọọ iche bụ na -emekarị nke ọrụ ndị nlekọta obi ụtọ ebe omume sitere na afọ 12 ruo 17 dị n'ụdị mgbịrịgba (ma ọ bụ tụgharịa "U"); N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, n'ihe dị ka afọ 14-15, a na-ahụ ihe ngosi ka njọ (na nyocha a) ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga na ndị sochirinụ; nke ka nke ọma, n'ime ọgbọ a, enwere ohere dị ukwuu maka ihe egwu yana ịchọ obere afọ ojuju (ma e jiri ya tụnyere ndị ka anya karịa mana buru ibu).
Iji mechie ...
Banyere ọrụ ndị isi na -atụ oyi, mgbochi, ebe nchekwa ọrụ na mgbanwe mgbanwe echiche na -egosi na ọ tozuru oke tupu ime atụmatụ; ya mere enwere ike iche na nke mbụ (nke bụ isi) bụ ntọala maka mmepe nke ikpeazụ (nke dị elu).
Tụnyere ọrụ ndị isi na -ekpo ọkụ, ụkpụrụ “U” a tụgharịrị anya nwere ike ịkọwa mmụba dị ukwuu maka omume ihe egwu a na -ahụkarị n'oge uto.
Karịsịa, ule maka ọrụ ndị isi oyi na nke ndị ọrụ na -ekpo ọkụ na -egosi n'ezie tụọ nha dị iche iche: nke mbụ, n'eziokwu, yiri ka ọ na -emetụtakarị na mmezu nke ebumnuche "nghọta" (dịka ọmụmaatụ, arụmọrụ ụlọ akwụkwọ), nke ikpeazu nwere njikọ na ebumnuche ọha na nke mmetụta uche.
Ọhụụ ọhụụ nke ọrụ ndị isi bara uru, ọ na -abụkarị nke na -ahazighị ahazi na ihe ndị mejupụtara ya oyi na-atụ.
Ọrụ mmemme “mmemme”: mmetụta nke nzuzo na nhazi na mgbochi na ụlọ akwụkwọ ọta akara
Mmekọrịta dị n'etiti ọrụ onye isi na asụsụ ụlọ akwụkwọ ọta akara
Mmekọrịta dị n'etiti ihe okike, ọgụgụ isi na ọrụ ndị isi
Poon, K. (2018). Ndị isi na -ekpo ọkụ ma dị jụụ na -arụ ọrụ n'oge uto: mmepe na ntinye aka na nsonaazụ mmepe dị mkpa. Frontiers na akparamaagwa, 8, 2311.
ndi isi oru, ọrụ ndị nlekọta obi ụtọ, ọrụ ndị isi na mmegharị uche, ọrụ ndị isi na arụmọrụ agụmakwụkwọ, oyi ọrụ, ọrụ ndị isi oyi na -ekpo ọkụ
Ọrụ ndị isi jụrụ oyi na ndị na -ekpo ọkụ: gịnị ka ha na -ebu amụma dị iche na ibe ha?2021-08-232021-08-23http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/funzioni-esecutive-fredde-e-calde.-cosa-predicono-di-diverso-tra-loro.jpg200px200px
Njikọ dị n'etiti ọgụgụ isi mmiri na ọrụ onye isiEdemede, ọrụ onye isi, ọrụ onye isi, ọgụgụ isi
Usoro iji kwalite mmụta: Kedu nke dị irè? Nkebi 2Ịmụta, Isiokwu, Ncheta, Ụzọ Ọmụmụ, Neuropsychology